UNGABUGCINA NJANI UBOMI BEBHETRI NGOKUKHUBAZA UKUHLAZIYA USETYENZISO LWEMVELAPHI KWI-IOS 7 - IOS
Ungabugcina njani uBomi bebhetri ngokukhubaza ukuHlaziya usetyenziso lweMvelaphi kwi-iOS 7
Ukuvuselelwa kwesicelo sangemva yinto entsha enikezelwa yi-iOS 7 evumela iiapps zakho ukuba zibale ngasemva. Oku kuyabavumela ukuba benze imisebenzi eyimfuneko ngelixa usenza ezinye izinto uqinisekisa ukuba bakulungele ukuhamba xa ufuna. Ngelixa eli nqaku libonelela ngenkonzo eluncedo, ikwakudala nencindi ekufuphi yebhetri yakho.
Ukuba unengxaki yokugcina i-iDevice yakho ihlawulisiwe imini yonke, zama ukukhubaza inkqubo yangasemva yokuhlaziya ukunika ibhetri yakho ithuba. Jonga le vidiyo ingezantsi ithunyelwe kuYouTubve nguNirmalTV ngolwazi oluthe kratya. Ukukhawuleza ku-1: 45 ukuze ufunde ukukhubaza inqaku ngokupheleleyo okanye ukhethe ngokulula kwaye ukhethe ukuba zeziphi iiapps ezinokuthi ziqhubeke ngasemva.
Qiniseka ukuba wabelana ngolu lwazi naye nabani na omaziyo nge-iPad okanye i-iPhone.
Umthombo woqobo - YouTube - Uyenza njani okanye uyikhubazise indawo yoHlelo lweNkqubo yokuhlaziya kwi-iOS kunye nokuGcina ibhetri
umthemba njani umntu
iingxaki eziqhelekileyo kubomi bemihla ngemihla
ileta yobungcali yokucebisa itemplate
Ukuziqhelanisa nomsebenzi wasekhaya kumadoda
ezona ziqhamo zihle zokutya kwisidlo
yintoni injongo yokuphila
Ukuhlala Uzimisele Ukwenzakala Kunye Nokubuyiselwa Kwimeko Yesiqhelo Umsebenzi Ozisebenzelayo 2 Uqeqesho Lokuzilolonga Unxibelelwano